ချင်း (ဂျင်း) ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - Hello Sayarwon
ဂျင်းဟာ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ အပါအဝင် အပူပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ စတင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများပြားစွာ ပါဝင်တာကြောင့် သူ့ကို တောင်အမေရိက၊ အာဖရိကနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနေရာတွေနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ စိုက်ပျိုးလာကြပါတယ်။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေကတော့ ဂျင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
HIV/ AIDS ဆေးတွေကြောင့် ပျို့အန်ခြင်းကို ဂျင်းနေ့စဉ် သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနတွေက AIDS ကုသမှုမယူခင် တစ်နေ့ကို မိနစ် ၃၀ လောက်ကြိုပြီး ဂျင်းအသုံးပြုခြင်းဟာ ပျို့အန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဂျင်းကို ခွဲစိတ်အပြီးမှာလည်း ပျို့အန်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုမပြုခင် တစ်နာရီကြိုပြီး ဂျင်း ၁-၅ ဂရမ်လောက် အသုံးပြုထားသူတွေဟာ ခွဲစိတ်မှုအပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ပျို့အန်နှုန်းနည်းပါးပါတယ်။
အော့အန်နေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာလည်း ဂျင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းကို ငုံဆေး၊ သကြားလုံးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် စိတ်ချရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပိုစိတ်ချရာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဖြည့်စွက်စာနဲ့ ဆေးတွေ မသောက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ဂျင်းမှာပါတဲ့ phenolic compounds တွေဟာ အစာခြေလမ်းကြောင်း ပြဿနာတွေကို သက်သာစေပြီး တံတွေးနဲ့ သည်းခြေရည်ကို ပိုထွက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျင်းဟာ ရာသီလာစဉ် အကောင်းဆုံးဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီစလာလာချင်း ပထမသုံးရက်မှာ ဂျင်း ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ကို သုံးကြိမ်ခွဲပြီး သောက်ခြင်းဟာ ရာသီလာခြင်းကြောင့် နာကျင်မှုကို သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီး ၆၂%ကတော့ ရာသီလာစဉ် ပထမသုံးရက်အတွင်း ginger extract (Zintoma and Goldaru) ကို တစ်နေ့လေးကြိမ် အသုံးပြုခြင်းဟာ ရာသီလာစဉ် နာကျင်မှုကို သိသိသာသာ သက်သာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျင်းဟာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ ibuprofen နဲ့ mefenamic acid လိုမျိုး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ နာကျင်မှုသက်သာစေတဲ့ အစွမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျင်းဟာ ကြွက်သားနာကျင်မှုကို ၂၅% သက်သာစေပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေက ဂျင်းဟာ ကားမူးခြင်း၊ ပင်လယ်မူးခြင်းတွေအတွက် သက်သာတယ်လို့ သက်သေမပြနိုင်ပေမယ့် လူအတော်များများကတော့ ခရီးမသွားခင် ဂျင်းသောက်ခြင်းဟာ သက်သာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုက ဂျင်းဟာ ကားမူးခြင်းကြောင့် ဗိုက်မကောင်းခြင်းကို သက်သာစေတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ dimenhydrinate ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျင်းကို စားခြင်း၊ သောက်ခြင်းဟာ လူအတော်များများအတွက် စိတ်ချရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ ဂျင်းဟာ ရင်ပူခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်မကောင်းခြင်း အစရှိတဲ့ ပျော့တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အချို့အမျိုးသမီးတွေက ရာသီ အများကြီးလာခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းကို လိမ်းဆေးအဖြစ် ခဏတာမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုခြင်းဟာလည်း စိတ်ချရတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာတော့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး ချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဂျင်းဟာ သွေးရောဂါရှိသူတွေမှာ သွေးထွက်နှုန်းမြင့်စေပြီး နှလုံးရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ ဆီးချိုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သူဟာ အင်ဆူလင်နဲ့ သွေးသကြားဓါတ်ပမာဏကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ အရင် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏ ပြောင်းလဲမှုတွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
Ginger: Health Benefits, Facts, Research. http://www.medicalnewstoday.com/articles/265990.php. Accessed April 24, 2017
သခွားသီး - အခွံနွှာမလား သို့ မနွှာဘူးလား